Oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Final Cut Pro
Talooyin Dhibaatooyinka finalka Cut Pro X
10 plugins Cool u Final Cut Pro X
Final Cut Pro X: Sida loo Dallaga Image ah
Raadinta barnaamij fudud video tafatir sida kale fce / fcp (Mountain Libaaxa ka mid ah) labada jaban ama ka yar u adag? Eeg halkan. Read More >>
Ay ku adag tahay in loo dhoofiyo MP4 galay FCP? App Tani waxay bixisaa qaab filaayo in FCP, iyo sidoo kale ProRes, AIC, DNxHD iwm si aad u hesho faylasha aad ku haboon FCP ugu fiican. Read More >>
Haddii Final Cut Pro X uma shaqeeyo, halkan waxaa ku qoran waxyaabo aad isku dayi kartaa in ay caadi waqti aad u hesho nidaamka. Read More >>
Posted by Larry Urdun | 13.10.2015
Kartida of Final Cut Pro si weyn u qoondeeyey oo halkan aan ku qor 10ka filimada caanka sameeyo Final Cut Pro. Read More >>
Saamayn A picture-in-sawir waa saamayn aad loo jecel yahay in in oo noo ogolaadaa in ay arkaan laba images mar. Tutorial waxay kuu muujinaysaa sida in la abuuro this ee FCP X. Read More >>
Liiska Maqaalkani waxa uu 10 plugins qabow Final Cut Pro. Waxay qiimaha, laakiin mid kasta oo abuuri saamaynta kaliya ma waxaad ka heli kartaa qaab kale. Read More >>
Halkan waa tuse faahfaahsan oo ku saabsan sida loo maareeyo maktabadaha ee Final Cut Pro X, oo ay la socdaan qaar ka mid ah "talooyin qarsoodi ah" in la sameeyo maktabado fudud shaqeeya. Read More >>
Top 40 tuuryo keyboard u Final Cut Pro X
In this article, waxaana la wadaagayaa Top 40 tuuryo keyboard u Final Cut Pro oo aan iyaga kala saaraa si ay u sameeyaan, kuwaas oo fudud in aad hesho. Read More >>
Waxaa jira labo siyaabood oo loo abuuro Burns Ken hawlgeli ee Final Cut Pro: isticmaalaya "Ken Burns saamayn" qalab iswada ama keyframes. Maqaalkani waxa uu muujinayaa labadaba farsamooyinka. Read More >>
In this article, waxaan doonayaa inaan idin ​​tuso sida loo codsado saamayn si clip ah, wax ka beddelo xaalkaas, ku meel gaar ah u noqon xaalkaas ama dibadda, ama waxaa gebi ahaanba tirtirto. Read More >>
Maqaalkani waxa uu ku tusayaa sida aad samayn Xayiraadda-loox oo mooshin gaabis ah ee Final Cut Pro X. Read More >>
Article Tani waxay muujinaysaa tallaabooyinka faahfaahsan si ay u abuuraan chromakey ah, sida greenscreen saamayn ku Final Cut Pro X. Read More >>
Article Tani waxay muujinaysaa tallaabooyinka faahfaahsan inay noola image ah in Final Cut Pro la Screenshot. Read More >>
Article Tani waxay muujinaysaa tallaabooyinka faahfaahsan ku darto horyaal ee Final Cut Pro X. ku Read More >>
Hagaha tallaabo-tallaabo oo muujinaysa sida ay u dajiyaan MTS in ay Final Cut Pro for tafatir dheeraad ah la MTS awood leh in ay Final Cut Pro Converter aad. Read More >>
Posted by Christine Smith | 25.09.2015
Sida loo soo dhoofsadaan AVCHD finalka cut pro x on Mac?
Mawduucani wuxuu kuu sheegi doonaa sida aad u dajiyaan AVCHD finalka cut x pro on Mac. Read More >>
Import wmv in ay Final Cut Pro leh tayo wanaagsan
Xalka sahlan oo dhakhso ah si aad wmv video la jaan qaada Final Cut Pro 7 / X tayada tafatirka ugu badnaan iyo hufnaan. Read More >>
Ma waxaad doonaysaa tallaabooyinka Asy si loogu badalo AVI in ay Final Iska yaree qaab socon Pro? Si aad si Final Goo dajiyaan karaa AVI Pro on Mac u habaynta si habsami (Mountain Libaaxa ka mid ah). Read More >>
FCP in DVD: Sida loo Guba Final Cut Pro Movies in DVD
Ha ogaadaan sida ay gubaan DVDs ka Final Cut Pro ama kaliya files .fcp ah? Maqaalkani waxa uu ku tusi doona sida ay gubaan FCP in DVD fudayd. Read More >>
Beddelaan AVCHD in Pro Goo Final leh tayo wanaagsan
Waxay leeyihiin dhibaato in ay dajiyaan aad AVCHD fiidiyo ugu Final Cut Pro X ama 7? Ma doonaysaa in la sameeyo FCP aqoonsan AVCHD videos adiga oo aan khasaaro tayada wax? Maqaalkani waxa uu bixiyaa xalka ugu wanaagsan. Read More >>
Posted by Christine Smith | 10.09.2013